Qurxinta - Decoora | Qurxin
Halkan waxaan ka heli doonaa kuwo badan qurxinta fikradaha gurigeenna, goobteena shaqo iyo deegaan kasta oo aan dooneyno. Waxaan badiyaa saacado badan isla goobta ku qaadnaa sidaa darteed, waa muhiim in la daryeelo qurxinta. Waxaan arki doonaa in qurxinta ay ka kooban tahay dhinacyo badan, laga bilaabo shumacyo fudud illaa midabka derbiyada, iyadoo loo marayo farsamooyinka iftiinka xiisaha leh. Tanna, halkan waxaan ku baran karnaa talooyin iyo farsamooyin wax ku ool ah taasi waxay naga dhigi doontaa inaan ku raaxeysto jawi raaxo leh meel kasta oo aan u baahanahay.
Fikradaha marka ay timaado iftiiminta beerta ama barxada guriga
by Maria Jose Roldan samee Maalinta 1 .
Iftiintu waa furaha marka ay timaado bixinta beerta ama barxadda diiran iyo…
Sida gidaarka loogu dhejiyo 3 muraayado yaryar
by Maria vazquez samee 4 maalmood .
Muraayadaha waa qalab cajiib ah oo lagu daro dabeecad gidaarka qaawan. Laakin ka baxsan sabab bilicda...
Ku cusboonaysii gurigaaga adigoo isticmaalaya microcement diyaar u ah in la isticmaalo
by Qurxin samee 1 toddobaad .
In dib u habayn lagu sameeyo guriga waa mid ka mid ah falalka ugu xiisaha badan marka la eego tayada...
Sida loo helo jimicsi qol yar
by Maria vazquez samee 1 toddobaad .
Ma ku leedahay qol bilaash ah guriga oo aad rabto inaad u isticmaasho si aad u abuurto jimicsi? Xitaa haddii qolku yar yahay waxaad…
Sida loo sameeyo sariirta sariirta
by Maria vazquez samee Toddobaadyada 2 .
Ma rabtaa in aad dareen jaceyl ah siiso qolkaaga jiifka? Sariirta carruurta u rog meel gabbaad gaar ah oo gudaha ah…
Fikradaha lagu cusboonaysiinayo dharka guriga inta lagu jiro bilaha xagaaga
by Maria Jose Roldan samee Toddobaadyada 2 .
Imaatinka xagaaga waxaa muhiim ah in la siiyo hawo cusub qurxinta guriga. Ma ahan…
Midabada lagu rinjiyeeyo marin la'aan
by Maria vazquez samee Toddobaadyada 3 .
Jidkaagu ma mugdi baa? Ma garanaysaan sida looga faa'iidaysto? U fiirsashada iftiinkaaga ayaa fure u noqon doonta joojinta…
Fikradaha qurxinta dhalashada carruurta
Ma waxaad guriga ugu dabbaaldegaysaa dhalashada ilmahaaga? Haddii aad go'aansatey inaad daryeesho mid kasta oo ka mid ah…
Furayaasha naqshadeynta maro-ka-dhismay
by Maria vazquez samee Toddobaadyada 4 .
Dharka-dhisidda armaajooyinka ayaa noo oggolaanaya inaan wanaajino booska kaydinta guriga. Waxaa kaloo xaqiiqo ah in kuwani ay sii kordhayaan…
Sida guriga loo qaboojiyo iyada oo aan la isticmaalin qaboojiyaha
by Maria Jose Roldan samee 1 bishii .
Xagaaga ayaa yimid waqti ka hor, waana sida ay khubarada saadaasha hawada sheegeen, heerkulka hadda jira waa…
Nadiifinta wasakhda midabbada wax ka sameysan alwaax
Bougainvillea oo ku dhex taal barxadaada ama beertaada
Daawooyinka guriga si looga saaro wasakhda lime ee dusha sare dusha sare
Sida loogu isticmaalo masduulaagii Feng Shui gurigaaga
Beeraha Ikea si ay u qurxiyaan gurigaaga
Waa maxay laambadaha loo isticmaalo saqafyada hoose ee guriga
18 walxo marmar ah si loogu qurxiyo gurigaaga
Aga jikooyinka iyo foornooyinka, raaxada guridda
Shelf ama niches musqushaada
Arches si aad u kala soocdo qolalka, ku bixi albaabbada!
Ma jeceshahay inaad wax rinjiso Samee istuudh kuu gaar ah
Dheryaha casriga ah ee dhirta gudaha
Jasiirado, jasiirado jikada ka samaysan
Dhammaystirka derbiyada musqusha
Ku keydi fikradaha khaanadaha Billy ee Ikea
Fikradaha lagu qurxiyo shelf-yarida Ikea
7 Jikada oo leh jasiirad leh meel cunno ayaa lagu daray